आखिर किन ? लमजुङको यो सुन्दर झरनामा गएर सेल्फी खिच्दा किन प्रहरीले पक्रेर लैजान्छ? यस्तो छ कारण – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ३१, २०७८ समय: १९:०२:४१
पछिल्लो समय आन्तरीक पर्यटकहरुले नयाँ ठाउँ जाने सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउने प्रचलन बढेको छ । यसमा लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका १ उदीपुरमा रहेको गाईखुरे झरना पनि पर्छ । त्यहाँ मानिसहरु जाने सेल्फी लिने र टिकटक बनाउने गर्न थालेका छन् । तर त्यहाँ जान र सेल्फी खिच्न टिकटक बनाउन अहिले लमजुङ प्रशासनले रोक लगाएको छ ।
अहिले बर्खामा त्यहाँ पानीको सतह बढेकाले झरना मनमोहक देखिन्छ । तर त्यही झरना हिउँदमा भने प्रायः सुनसान हुनेगर्छ । यही गाईखुरे झरनामा बर्खाको समयमा जाने पर्यटकलाई त्यहाँ नजान र सेल्फी नखिच्न प्रशासनले सूचना जारी गरेको हो ।
महामारीको जोखिम कायमै रहँदा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको र कतिपय झरना व्यवस्थित नभएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि जोखिमयुक्त रहेकाले स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवैलाई मध्यनजर गर्दै जान रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुईँटेलले जानकारी दिए।
‘विशेषगरी बालबच्चा, किशोरकिशोरी, युवायुवती गाईखुरे लगायतका अन्य झरनामा गइ टिकटक बनाउने, पौडी खेल्ने, फोटो खिच्ने गरेको देखियो’, उनले भने महामारीको जोखिम कायमै छ । कतिपय झरना सुरक्षाका दष्टिकोणले पनि जोखिमयुक्त छन् । त्यसैले स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखी तत्कालका लागि झरनामा जान रोक लगाइएको हो ।’ तस्वीर: सन्देश पौडेल